के तपाईको दाँत अमिलो खादा कुडिने गर्छ ? कसरी निराकरण गर्ने ? | latestnepali.com
प्रायः अमिलो खाँदा दाँत कुडिने समस्या हुन्छ । दाँत कुडिदा कुनै पनि कडा वस्तु चपाउन निकै मुस्किल पर्ने हुन्छ । दाँत कुडिनुको कारण, दाँतको सबभन्दा भित्र पल्प क्याभिटी, बीचमा डेन्टाइन र बाहिर इनामेल हुन्छ । दाँत कुडिनु सित सम्बन्धित तह इनामेल हो ।
यसमा खासगरी क्याल्सियम अरू खनिज पदार्थहरू पाइन्छन् । इनामेल एमेलोवास्ट भन्ने एक प्रकारको कोषहरूबाट बनेको हुन्छ । र, यसको मुख्य काम डेन्टाइललाई जोगाउनु हो । अमिलो खाँदा अमिलोमा भएको साइट्रिक अम्लले अनामेलको लेपलाई असर पुर्याइदिन्छ । यसैले गर्दा अमिलो खाँदा दाँत कुडिने गर्दछ ।
दाँत सिरिङ–सिरिङ किन हुन्छ ?
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो दाँतको बाहिरी भागलाई इनामेल भनिन्छ। इनामेलभन्दा भित्रको भाग डेन्टिन हो। सबैभन्दा भित्रको भागलाई पल्प भनिन्छ। विभिन्न कारणबस इनामेल खिइँदा डेन्टिन देखिन्छ र सिरिङ–सिरिङ हुन्छ। डेन्टिनमा रहने नशाहरु संवेदनशिल हुन्छन्।
विभिन्न कारण इनामेल खिइन्छ :
१) गलत तरिकाले तथा धेरै बल लगाएर दाँत माझ्नाले इनामेल खिइन पुग्छ र डेन्टिन देखिन्छ। अनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउँछ।
२) एसिड भएको खानेकुराको सेवन, पेटको समस्याले जसले गर्दा अमिलो पानी आउँछ र इनामेल खियाउँछ।
३) कसै–कसैको सुत्दाखेरि दाँत किट्ने बानी हुन्छ । यस्तो बानी नियमित गर्नाले इनामेल खिइन्छ।
४) मुख सफा नराख्नाले गिजाको रोग जस्तै गिजा तल सर्ने भएर दाँतको जरा देखिन पुग्छ र सिरिङ–सिरिङको समस्या आउँछ।
६) यदि नमिलेको दाँत छ भने पनि टोकाइ नमिलेर दाँत खिइन सक्छ
– दाँत कीराले खायो भने पनि सिरिङ–सिरिङ गर्ने समस्या आउँछ।
– पहिले भरेको दाँतको सिमेन्ट निस्कियो भनेपनि सिरिङ–सिरिङ हुन्छ।
– एकपटक भरेको दाँतमा फेरि कीराले खान सुरु ग¥यो भने पनि यो समस्या आउन सक्छ।
– कहिलेकाहीँ सिमेन्ट भरेपछि, ब्लिचिङ गरेपछि पनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुनसक्छ। तर त्यो केही समयपछि आफैँ सन्चो हुन्छ।
– कहिलेकाहीँ एसिडयुक्त मुख कुल्ला गर्ने औषधिको प्रयोगले पनि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या आउनसक्छ।
सिरिङ–सिरिङबाट बच्ने उपायहरु :
१) सही तरिकाले ब्रस गर्नुपर्छ। ब्रस कडा छ भने नरम ब्रसको प्रयोग गर्नुपर्छ।
२) एसिडभएको खानेकुरा सकेसम्म नखाने अथवा कम खाने, यदि सेवन गरेमा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने बानी बसाउने।
३) ग्यास्ट्रिकसम्बन्धी समस्याको उपचार गराउने।
४) सुत्दाखेरि दाँत किट्ने बानी छ भने दन्त चिकित्सकको तुरुन्तै परामर्श लिइहाल्ने र माउथगार्ड लगाउने।
५) दिनको दुइपटक फ्लोराइडयुक्त मन्जनले दाँत माझ्ने बानी बसाउने, फ्लोराइड भएको माउथवास, फ्लस प्रयोग गर्ने र दाँत, गिजा स्वस्थ राख्ने।
६) यदि खैनी, चुरोट सेवन गर्ने बानी छ भने तुरुन्तै त्याग्ने।
यदि दाँत सिरिङ–सिरिङ हुने समस्या छ भने तुरुन्तै दन्त चिकित्सककहाँ गएर कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। कारणअनुसार उपचार फरक पर्छ।
१) संवेदनशीलतामा प्रयोग गर्ने मन्जनहरु थुप्रै नाममा बजारमा उपलब्ध छन् जुन दुई हप्ताजति प्रयोग गरे सिरिङ–सिरिङको समस्या बिस्तारै कम भएर जान्छ।
२) यदि गिजा धेरै तल सरेर दाँतको जरा देखिएर यस्तो समस्या आएको हो भने सर्जरी पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसो गर्दा देखिएको दाँतको जरा छोपिन्छ र समस्या कम भएर जान्छ।
३) दाँत किट्ने बानीले यो समस्या आएको हो भने माउथगार्ड लगाउनु पर्छ।
४) दाँत किराले खाएर यो समस्या आएको हो भने तुरुन्त दन्त चिकित्सककहाँ गएर दाँत भरिहाल्नुपर्छ।
५) यदि पहिले भरेको दाँतको सिमेन्ट निस्किएको छ भने फेरि भर्नुपर्छ।
६) सकेसम्म पेटको समस्याको उपचार छिट्टो गराइहाल्नुपर्छ।
७) नमिलेको दाँतको अर्थोडोन्टिक उपचार गराउनुपर्छ, जसमा तारको सहायताले नमिलेको दाँत मिलाइन्छ र दाँत अझै खिइनबाट बचाउन सकिन्छ।
८) यदि माथि उल्लेखित उपचार गर्दा पनि निको नभएमा रुट क्यानल उपचार गराउनु पर्ने हुन सक्छ।
दाँत दुखेको केही क्षणमै चट् गर्ने उपाय :
१) आलु – यदि दाँतको दुखाईका साथ–साथै सुन्निने पनि गर्छ भने आलुलाई ताछेर त्यसको टुक्रालाई दुखेको ठाउँमा १५ मिनेट राख्नुहोस्, चाँडै आराम महशुस गर्नुहुन्छ।
२) कागती – कागतीमा भिटामिन सी हुन्छ, जसले दाँतको दुखाईबाट छुट्कारा दिलाउँन सक्छ। दुखेको भागमा कागती लगाउदा तुरुन्तै राहत मिल्छ।
३) लसुन – लसुनको एक पोटीलाई नुनसँग खानुहोस्, यसले दाँतको दुखाईबाट राहत दिन्छ।
४) प्याज – हरेक तीन मिनेटमा प्याँजको एक टुक्रा खाने गरेमा मुखका किटाणु मर्छन् र यसले दाँतको दुखाई पनि कम गर्छ।
५) ल्वांग – सबैलाई थाहा भएको कुरा, दाँत दुखेमा ल्वाङले तुरुन्तै आराम दिन्छ । दुखेको भागमा ल्वाङ वा ल्वाङको तेल लगाउन सकिन्छ।
दाँत दुखेमा के गर्ने ? घरेलु विधिद्वारा यसरी उपचार गर्न सकिन्छ
दाँतले मानिसलाई सुन्दर बनाउन थप सहयोग गर्दछ । तर, त्यहीँ दात कहिलेकाँही दुखेर मानिसलाई हैरान बनाउँछ ।
दाँत दुखेमा डाक्टरलाई तुरुन्तै देखाउनु पर्दछ । तर, तत्काल यो सम्भव छैन भने हामीले घरेलु विधिद्वारा यसलाई ठीक पार्न सक्छौं । आज हामी दाँतको दुखाइ ठीक पार्ने घरेलु उपायहरू बताउँछौं ।
१. निमपत्ता लगाउने: ताजा निमको पातलाई पखालेर नुन मिसाई पिसेको लेदोलाई दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउँदा निको गर्छ । निमको पातमा व्याक्टेरियाबिरुद्ध लड्ने गुणसमेत हुने भएकाले निमपत्ता दुखाई कम गर्ने प्रभावकारी घरेलु उपाय हो । हरियो निमपत्ता नभएमा सुकेको पातलाई पानीमा पकाएर सो मन तातो पानीले कुल्ला गर्न सकिन्छ । दैनिक तीनपटक मन तातो पानीले कुल्ला गर्नुपर्छ ।
२. नुन–पानीले कुल्ला गर्नेः एक कप मन तातो पानीमा एक चम्चा नुन मिसाएर मुख कुल्ला गर्दा दाँत दुखेको निको गर्छ । नुन–पानीले मुखमा भएका फोहर खानेकुरा हटाएर सफा गरिदिनुका साथै दुखाई निको गर्छ ।
३. लसुनको पेष्ट लगाउनेः दाँत दुखाइको पीडा न्यून गर्न लसुन एउटा आयुर्वेदिक औषधि हो । लसुनमा हुने एलिसिन नामक तत्वले दाँतको पीडा निको पार्छ । दाँत दुखेको ठाउँमा लसुनको पेस्ट लगाउँदा दुखाई कम गर्छ ।
४. बेसारमा पानी मिसाएर लगाउनेः बेसारमा हुने एन्टिब्याक्टेरियल तत्वले दुखाई कम गर्छ । आधा चम्चा बेसारमा केही थोपा पानी मिसाएर दाँत दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाई कम हुन्छ ।
५. ल्वाङको तेलको लगाउनेः ल्वाङको तेलमा एन्टिब्याक्टेरियल तत्त्व हुने भएकाले दुखाइ कम गर्छ । तेलमा हुने इयुजेनोल नामक तत्त्वले दाँतको संक्रमण कम गर्छ । कटनमा दुई–तीन थोपा तेल मिसाएर दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाई कम गर्छ ।
६. काँक्राको गुदी लगाउनेः काँक्रोमा दुखाई शान्त पार्ने तत्व हुने भएकाले दाँत दुखाइमा यो उपयोगी हुने आयुर्वेदमा उल्लेख छ । काँक्रोको गुदी दुखेको ठाउँमा राख्दा वा काँक्रो खाँदा दुखाइ कम गर्छ ।
७. तुलसी पातमा तोरीको तेल मिसाएर लगाउनेः तुलसीको पातलाई तोरीको तेलमा मिसाएर दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाई कम गर्छ ।
८. अशोक वृक्षको बोक्रा लगाउनेः अशोक वृक्षको बोक्राको धुलो पिसेर दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाई कम हुन्छ ।
९. हिङ लगाउनेः हिङलाई विभिन्न खानेकुरामा प्रयोग गरिन्छ । हिङमा हुने एन्टिव्याक्टेरियल तत्वले दाँतको दुखाई कम गर्छ ।
१०. पुदिनाको पात लगाउनेः पुदिनाको पात चबाउँदा पनि दाँतको दुखाई कम हुन्छ । पुदिनामा हुने तत्वले दुखाईलाई शान्त पार्छ ।
११. त्रिफलाले मुख कुल्ला गर्नेः हर्रो, बर्रो अमलाको धुलोलाई तातो पानीमा मिसाएर मुख कुल्ला गर्दा दाँत दुखेको कमा हुन्छ । यसले दाँत कुहिनबाट पनि बचाउँछ ।
१२. गहुको पातः गहुँको हरियो पात पिसेर दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दुखाई कम गर्छ ।
१३. आलुः आलुको टुक्रालाई पातलो पार्ने र दुखेको ठाउँमा राख्दा शान्त पार्छ ।
१४. अदुवाः धेरै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने अदुवा दाँतको दुखाई कम गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ । अदुवालाई थिचेर दुखेको भागमा लगाउँदा यसले दुखाई कम गर्छ ।
१५. अम्बाको पातः अम्बाको पातलाई पेस्ट बनाएर दुखेको ठाउँमा लगाउँदा दाँतको दुखाई कम गर्छ ।
१६. तेल दल्नेः सस्र्युँ, नरिवल र सूर्यमुखीको तेल मिसाएर दाँत दुखेको ठाउँमा मिसाइ १० देखि १५ मिनेटसम्म दुखेको ठाउँमा राख्ने । त्यसपछि मनतातो पानीले कुल्ला गर्ने । दाँतको दुखाई कम हुन्छ ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो ।